Moe Kai: Voice Journal မှ စေတနာရှင် ပြည်သူကြီး ပေးခဲ့တဲ့ အတွေးများ
Voice Journal မှ စေတနာရှင် ပြည်သူကြီး ပေးခဲ့တဲ့ အတွေးများ
မအားမလပ် အလုပ်တွေရှုပ်လို. မရေးတော့ဘူး ထားပေမယ့် တွေးရင်းတွေးရင်း မနေနိုင်တော့လို. ရေးပါဦးမယ်။ မရေးရရင် အီးတစ်နေတဲ့ ဖီလင်နဲ. နေလိုမရဖြစ်နေလို. ရေးမှကို ဖြစ်တော့မယ်။
တလောက Voice Journal က စေတနာရှင်ပြည်သူကြီး တယောက်ရေးထားတဲ. ဆရာဝန်တွေ အပေါ် သူ.ရဲ. သဘောထားနဲ. ပေးထားတဲ့ အကြံပြုချက်များကို ဖတ်ရပါတယ်။ သူ.ကြောင့်ပဲ Facebook မှာ အတော် ဂရက်ရိုက်သွားခဲ့ရပါသေးတယ်။ ကျမကတော့ ဘယ်သူ.ဘက်မှ ဘက်မလိုက်ပဲ သူ.ရဲ. အယ်ဒီတာ ပေးစာကို အချက်လက်ကျကျ ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ချင်ပါတယ်။
ဒီစေတနာရှင် ပြည်သူကြီးက သူ.အစာအိမ်ရောင်တာ သွားပြတာ ကြည့်မယ့် ဆရာဝန် ဆေးခန်းလာတာ နောက်ကျတာနဲ. ဒေါသပုန်ထပြီး ရေးထားတဲ. စာဆိုတော့ ဒေါသရဲ. အငွေ.အနှောင်းတွေ သူစာမှာ ထင်ဟပ်နေဆဲပါ။ သူ.စာကို ဖတ်ရတာ Australia ကို အတော် အထင်ကြီးပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံမှာနေပြီး ကိုယ့်ပြည်သူပြည်သားတွေကို ကုသပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်တွေကိုတော့ အတော်ဆော်ချင်နေပုံ ရတယ်လို. အထင်အမြင် ရစေပါတယ်။ ဒေါသနဲ. ရေးထားတော့ စာတပိုဒ်လုံး မှန်တာလဲ ပါပါလိမ့်မယ်၊ ပိုပြော ချဲ.ပြောတာတွေလဲ ပါပါလိမ့်မယ်။ ဆေးပညာ အကြောင်း နားမလည်တဲ့ အရပ်သားဆိုတော့ သူမှန်တယ်ထင်ပေမယ့် မှားနေတာတွေလဲ ပါပါတယ်။ စာ တပိုဒ်လုံး ထောက်ပြစရာ အချက်တွေ အများးကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမက အဲဒါတွေ တခုချင်း ထောက်ပြ ဖြေရှင်း ချေပချင်လို. မဟုတ်။ကျမရင်ထဲ အခုထိ ကျလိ ကျလိ ယားစေတဲ့ သူ.ရဲ. အကြံပြုချက်တွေကို ပြန်ပြောပြချင်လို.ပါ။
ကဲ စေတနာရှင် ပြည်သူကြီးရဲ. စေတနာ အပြည့်နဲ. အကြံပြုထားတဲ့ အကြံပြုချက်များ .... တခုချင်း ပြန်ကြည့်ရအောင် ..
၁။ ဆေးတက္ကသိုလ်များမှ ဆရာဝန်များ ကျင့်ဝတ်ကို ကောင်းစွာ သင်ကြားပေးရန်။
(ဆရာဝန် ဖြစ်လာသူတိုင်း ဆရာဝန် ကျင့်ဝတ်နဲ. အညီ ကျင့်ကြံရမယ် ဆိုတော့၊ လူသား အားလုံးလဲ လူသား ကျင့်ဝတ်နဲ. ကျင့်ကြံရမယ်။ ဒါကိုတော့ ကျမ လက်ခံနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စေတနာရှင် ပြည်သူကြီးကပဲ ပြောထားတာ၊ သူ.တူမ ဆရာဝန်မ Australia မှာ ညသန်းခေါင်လာတဲ့ အမျိုးသမီးလူနာကို အချိန်လားဖြုန်းနေမှန်း သိပေမယ့် မကုရင် လူနာ တရားစွဲမှာကြောက်လို. ပျူပျူငှာငှာ ဆက်ဆံပြီး ကုပေးရတယ်တဲ့။
ဟုတ်ကဲ့ ကျမအခုလုပ်တဲ့ England မှာလဲ အချိန်ကုန် ငွေကုန် အရက်သမား ဆေးသမားများ ဆေးရုံမှာ လာလာ ရှုပ်တာ အမြဲကို ရှိပါတယ်။ သူ.တို.တရားစွဲမှာစိုးလို.တော့ မဟုတ်၊ ဆရာဝန်ဆိုတဲ့ ကျင့်ဝတ်ကြောင့် ကျမတို.မှာ လူတန်းစားခွဲခြားလို. မရပဲ အားလုံး တန်းတူညီမျှ ဆက်ဆံပြီး ဆေးကုပေးရပါတယ်။ စေတနာရှင်ကြီးရဲ. တူမ ဆရာဝန်ကျင့်ဝတ် ဆိုတာ ဘာတွေလဲ မေ့ကုန်ရင် ပြန်ဖတ်ရအောင် ပြောပြတာပါလို.။ စေတနာရှင်ကြီးကလဲ ဆရာဝန်ကျင့်ဝတ်နဲ. ပက်သက်ပြီး ဝင်ရောက် ဝေဖန် အကြံပြုချင်ရင် ဆရာဝန် ကျင့်ဝတ်မှာ ဘာတွေပါလဲဆိုတာ အရင်လေ့လာပါသင့်ပါတယ်လို.)
၂။ ဆရာဝန် တဦးလျှင် ဆေးခန်း တခုထက် ပိုထိုင်ခွင့်မရှိစေရန်
(စေတနာရှင်ကြီးရေ “ကိုယ်ပိုင်အားလပ်ချိန်”တို. “အခြေခံ လူအခွင့်အရေး”တို. ဆိုတဲ့ စကားတွေ ကြားဖူးပါသလားလို.။ အစိုးရအလုပ်ချိန် ဆေးရုံမှာ တာဝန် ထမ်းဆောင် အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ အချိန် ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင် အချိန်မှာ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ဆေးခန်း ၁ခုပဲ ထိုင်ထိုင်၊ အခု ၁၀၀ ပဲထိုင်ထိုင်ပေါ့။ အခြေခံ အကျဆုံး လူ.အခွင့်အရေးတောင် ဆရာဝန်တွေမှာ မရှိရတော့ဘူးလား။ ဆရာဝန် ဆေးခန်းနောက်ကျတယ်၊ မကျေနပ်ဘူးဆိုရင် အဲဒီ ဆရာဝန်နဲ. သွားမပြနဲ.ပေါ့ကွယ်။ ရီစရာတွေ သိပ်မပြောပါနဲ.လို.။ အဓိပါယ်မရှိတဲ့ အကြံပြုချက်တွေနဲ. တော့ ဆရာဝန်တွေကို မလုပ်ကြံပါနဲ.လို.)
၃။ ဝင်ငွေခွန် စည်းကြပ်ရန်။ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး သမားတော်ကြီးများ MBBS ဘွဲ.ရသည့် အချိန်မှစ၍ ယနေ.အထိကာလ တခုလုံးအတွက် ၁နှစ်လျှင် သိန်း၁၀၀၊ နှစ်၃၀ဆိုလျှင် သိန်း ၃၀၀၀ သတ်မှတ် ဝင်ငွေဆောင်ရန်
(ဗုဒ္ဓေါ မြတ်စွာဘုရား ... ဆရာဝန်ဖြစ်ရတာ အတော် မလွယ်ပါလားနော်။ နိုင်ငံတခုလုံး စည်းပွားရေးရှင်ကြီးတွေ၊ ခရိုနိုကြီးတွေ၊ လေကြောင်းလိုင်း တလိုင်းလုံးပိုင်ပြီး မိလျှန်နဲ.ချီ လစဉ် ဝင်ငွေရှိပါတယ် ဆိုတဲ့ လူတွေ၊ အသာ မျက်ကွယ်မှာထားလို. ဆရာဝန်ကြီးတွေပဲ အခွန်ကောက်ဆိုပါလား ...။ စေတနာရှင်ကြီးရယ် ဦးဏှောက်ရှိခဲ့ရင် နဲနဲ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဦးဏှောက်ရှိမရှိ သေချာအောင်လဲ CT Head scan လေးရိုက်ကြည့်ပါလားလို ဆရာဝန် တယောက်အနေနဲ. ပြန်အကြံပြုချင်ပါတယ်။ လက်လုပ်မှ ပါးစပ်လှုပ်ရတဲ့ ဆရာဝန် ဆိုတဲ့ လူတန်းစားနဲ. နိုင်ငံ့ သယံဇာတာတွေနဲ. ကြီးပွားနေတဲ့ သူတွေနဲ. ဘယ်သူက အခွန်ပိုဆောင်သင့်လဲ။
မှန်ကန်တဲ့ တရားမျှတတဲ့ ဥပဒေရှိတဲ့ နိုင်ငံသာဆိုရင် လူတိုင်း တူညီတဲ့ အခွင့်အရေးနဲ. ဝင်ငွေ အနည်းအများပေါ် မူတည်ပြီး တိုင်းသူပြည်သားတိုင်း အချိုးကျ အခွန်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ အဲ Educational Clearance (EC) အတွက် ဒါဏ်ငွေပေးရမယ်ဆိုရင်လဲ ဆရာဝန်ဆိုတာ တခုပဲ ခွဲခြားမထားပဲ၊ ရှိသမျှ ပညာတတ် တက္ကသိုလ်အားလုံး ညီတူညီမျှ ကောက်ခံဖို. စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ တရားမျှတတဲ့ ဥပဒေ ဖြစ်မှာပေါ့နော်)
၄။ ဆရာဝန် ကြီးကြပ်ကော်မတီဖွဲ၍ စည်းကမ်းဖေါက်ဖျက်သော ဆရာဝန်ကြီးများအား ဆမ ဒါဏ်ငွေ အစရှိသဖြင့် အပြစ်ယူရန် ....
(ဒီအချက်ကိုတော့ အဓိပါယ် ရှိတဲ့ အတွက် ကျမ ထောက်ခံပါတယ်။ ဆရာဝန်လဲ ဆရာဝန် ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းဆိုတာ ရှိတယ် မဟုတ်ပါလား။ စည်းကမ်းဖေါက်ဖျက်လို အပြစ်ဒါဏ်ပေးတာ တရယ်မျှတပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်တွေ အပေါ် မတရား စွပ်စွဲ အပြုလုပ်ခံရတဲ့ ကိစ္စတွေအတွက် ဆရာဝန်တွေဖက်က ရပ်တည်ပေးမယ့် အစိုးရ အဖွဲအစည်းလဲ ဖွဲပေးသင့်ပါတယ်။ လူသတ်သမားတောင် FAIR TRIAL ပေးပြီးမှ ပြစ်ဒါဏ်ချရတာ မဟုတ်လား၊ တဘက်ပြောစကားနဲ. တင် အပြစ်ပေးလိုမရ၊ နှစ်ဘက်လုံး နားထောင်မှ ဘယ်ဘက်က မှားလဲဆိုတာ သိနိုင်တော့မှာပေါ့နော်)
ကဲကဲ ရေးပြီးတော့ မောသွားပြီ။ ဒီမှာပဲ ရပ်ပြီး ကိုယ်အလုပ် ကိုယ်ပြန်လုပ်ရတော့မယ်။
Now I am just going to mind my own business!!
မှားတာရှိ ဝန်ဒါမိ၊ အပြုသဘော ဝေဖန်ချက်များအားလုံးကို လဲ ကြိုဆုိုပါ၏
Islams and Terrorism
Voice Journal မှ စေတနာရှင် ပြည်သူကြီး ပေးခဲ့တဲ့ အေ...
Unusual names in medical profession
Don't criticise what you don't know well enough